Qarax Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Dalka Al-jazaa’ir. – Bogga Calamada.com
Qarax Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Dalka Al-jazaa’ir.
Wararka ka imaanaya dalka Al-jazaa’ir ee dhaca Waqooyga Qaarada Afrika waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah dalkaasi uu ka dhacay qarax culus oo lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada dowlada daba dhilifka dalkaasi.
Kolanyada Qaraxa lala beegsaday waxey ku socdaalayeen qeybo ka mid ah Gobalka Tabesa oo ah gobal dhaca dhanka Bari ee dalka Al-jazaa’ir.
Qaraxa oo loo adeegsaday Miinada dhulka lagu aaso ayaa haleeshay gaari ciidan waxa uu qaraxan sigaar ah kaga dhacay agagaarka deegaanka Bi’rul Caatir ee gobalka Tabesa,iyadoona faahfaahin laga helayo khasaaraha uu geystay qaraxaasi.
Inta la xaqiijiyay qaraxan waxaa lagu dilay Shan askari oo uu ku jira sarkaal sare Tiro kalane waa lagu dhaawacay kuwaasi oo la xaqiijiyay iney dhaawacyadooda culusyihiin,sidoo kale qaraxan waxaa lagu burburiyay gaarigii dagaal ee Miinada ay haleeshay.
Mas’uuliyadda qaraxan lagu dilay askarta iyo sarkaalka ka tirsan dowlada daba dhilifka Al-jazaa’ir islamarkaana lagu dhaawacay tiro kale oo askar ah waxaa sheegtay Mujaahidiinta Al-qaacidah ee Dhulka Bilaadul Magribil Islam,waxey Mujaahidiinta qoraal ay soo saareen ku goodiyeen iney sii Labo laabayaan weerarada ka dhanka ah dowlada Ridada Al-jazaa’ir.